ဒီရာသီ ဆိုးလ်ရှား ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ထုတ်ဖော် ချီးကျူးလိုက်တဲ့ #ဖာဒီနန် - SPORTS MYANMAR
ဒီရာသီ ဆိုးလ်ရှား ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ထုတ်ဖော် ချီးကျူးလိုက်တဲ့ #ဖာဒီနန်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ဂန္ဓဝင် ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ ရီယို ဖာဒီနန် က လက်ရှိ နည်းပြ ဖြစ်သူ အိုလီ ဂန်နား ဆိုးလ်ရှား မှ လူငယ် ကစားသမား လေး ဖြစ်တဲ့ မာဆွန် ဂရင်းဝုဒ် အပေါ် ယုံကြည် မှု ထားခဲ့ ပြီး ကစား ခွင့်တွေ ပေး ခဲ့တဲ့ အပေါ် ကျေနပ် ပျော်ရွှင် နေ ပါတယ် ။
လက်ရှိ အချိန် မှာ အသက် 17 နှစ် အရွယ်သာ ရှိနေ သေးတဲ့ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ် ကစားသမား လေး ဂရင်းဝုဒ် ဟာ အသင်း ရဲ့ ရာသီသစ် အစ ပွဲစဉ်4ပွဲ လုံးမှာ လူစားဝင် ကစားသမား အဖြစ် ပါဝင် ကစား ခွင့် ရရှိ ထားခဲ့ ပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် ဒီနွေ အပြောင်း အရွှေ့ မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း မှ တိုက်စစ် ကစားသမား တွေ ဖြစ်ကြ တဲ့ အလက်ဆစ် ဆန်းချက် နဲ့ ရိုမီလူ လူကာကူ တို့ အင်တာ မီလန် အသင်း ဆီ ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ ကြတဲ့ အတွက် ဂရင်းဝုဒ် ဟာ ယူနိုက်တက် မှာ ပွဲထွက် ကစား ခွင့်တွေ ပိုမို ရရှိ လာနိုင် ခြေ များပြား နေခဲ့ ပါတယ် ။
အခုတော့ ဖာဒီနန် က သူဟာ ဂရင်းဝုဒ် ကို အားပေး တဲ့ ပရိသတ် တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ၊ အကယ်ဒမီ ထွက် ကစားသမား လေးဟာ အနာဂတ် မှာ ထွန်းပေါက် နိုင် လိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည် ကြောင်း မျှော်လင့် ချက်တွေ ထားရှိ နေ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အိုလီ ကလည်း ဂရင်းဝုဒ် ဟာ စီနီယာ အသင်း အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေ ပြီ ဆိုတာ သိရှိ နေပြီ လို့ ထင်ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
” အိုလီ က ဂရင်းဝုဒ် ဟာ အသင်း အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေ ပြီလို့ တွေးတော နေလောက် ပါပြီ ။ ဒါဟာ မာဆွန် အတွက် တစ်ကယ့် ကို အရေးကြီး လှတဲ့ အခိုက် အတန့် တွေ ပါပဲ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက ကျွန်တော် လူငယ် အသင်း တွေ ကစား ကြတဲ့ ပွဲ အချို့ ကြည့်ဖြစ် ပါ သေးတယ် ။ ကျွန်တော် TV ဖွင့်လိုက် တဲ့ ပွဲတိုင်း သူဟာ ဂိုးတွေ သွင်းယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ”
” ဒီ ကောင်လေး က ပါရမီ ကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင် ထားတယ် ဆိုတာ နဲ့ ပတ်သက် လို့ သံသယ ဝင်စရာ မလို ပါဘူး ။ အခုတော့ သူ့ အနေ နဲ့ စီနီယာ အသင်း အတွက် ပါဝင် ကစား ပေးနိုင် ဖို့နဲ့ အကျိုး သက်ရောက် မှုတွေ လုပ်ပြ သွားနိုင် ဖို့ပဲ လိုအပ် နေပါ တော့တယ် ”
” အဲ့တာ နဲ့ ပတ်သက် လို့ ကျွန်တော် နှစ်သက် မိတဲ့ အရာ တစ်ခု က အိုလီ က သူ့ရဲ့ ပြောစကား တွေကို တည်တာ ပါပဲ ။ သူဟာ အခု လူငယ် ကစားသမား လေးတွေ ကို နေရာ ပေးနေ ပါတယ် ။ ဒါဟာ အခြား အကယ်ဒမီ ကစားသမား လေးတွေ အတွက် ‘ ငါတို့ လုံလောက်စွာ ကောင်းမွန် ကြမယ် ဆိုရင် စီနီယာ အသင်း မှာ နေရာ ရနိုင် လိမ့်မယ် ‘ ဆိုပြီး ကြိုးစား လိုစိတ် တွေ ဖြစ်ပေါ် စေနိုင် ပါ လိမ့်မယ် ”
” ဒါဟာ နောင် လာမယ့် လူငယ် မျိုးဆက် သစ် ကစားသမား လေးတွေ အတွက် လည်း တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန် လှတဲ့ အရာ တစ်ခု ဖြစ်လာ စေနိုင် ပါ လိမ့်မယ် ။ အခုတော့ မာဆွန် ဟာ အသင်း ကြီးဆီ ရောက်ရှိ လာပြီး ကောင်းမွန်စွာ ကစားပြ နေတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ကျေနပ် ပျော်ရွှင် မိ ပါတယ် ”
” လူကာကူ နဲ့ ဆန်းချက် တို့ ထွက်ခွာ သွားခြင်း က ယူနိုက်တက် တိုက်စစ် ကို ပေါ့သွား စေပါ လိမ့်မယ် ။ အခုတော့ အသင်း မှာ ကျန်ရှိ နေတဲ့ ကစားသမား တွေ အပေါ် ဖိအား တွေ ပိုမို သက်ရောက် လာပါ လိမ့်မယ် ”
” ဒီ အတွက် အိုလီ က ” နားထောင် ၊ မင် ဒီ ဖိအား ဒဏ်တွေ ကို ခံစား နိုင် မလား ? ဒါတွေ ကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း နိုင်ပါ့ မလား ? ဒီ အတွက် ခံနိုင်ရည် တွေ အပြည့် ရှိ နေပြီ လား ? ” ဆိုပြီး ပြောသွား မှာ အသေအချာ ပါပဲ ။ ဒီ အတွက် ကျွန်တော် တို့ အဖြေ တွေကို မြင်တွေ့ ကြရ ပါ တော့မယ် ” လို့ ဖာဒီနန် က အဆုံးသတ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ဒီရာသီ ဆိုးလျရှား ခမြှတျခဲ့တဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ တဈခုကို ထုတျဖျော ခြီးကြူးလိုကျတဲ့ #ဖာဒီနနျ
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ ဂန်ဓဝငျ ကစားသမား ဟောငျး ဖွဈသူ ရီယို ဖာဒီနနျ က လကျရှိ နညျးပွ ဖွဈသူ အိုလီ ဂနျနား ဆိုးလျရှား မှ လူငယျ ကစားသမား လေး ဖွဈတဲ့ မာဆှနျ ဂရငျးဝုဒျ အပျေါ ယုံကွညျ မှု ထားခဲ့ ပွီး ကစား ခှငျ့တှေ ပေး ခဲ့တဲ့ အပျေါ ကနြေပျ ပြျောရှငျ နေ ပါတယျ ။
လကျရှိ အခြိနျ မှာ အသကျ 17 နှဈ အရှယျသာ ရှိနေ သေးတဲ့ ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈ ကစားသမား လေး ဂရငျးဝုဒျ ဟာ အသငျး ရဲ့ ရာသီသဈ အစ ပှဲစဉျ4ပှဲ လုံးမှာ လူစားဝငျ ကစားသမား အဖွဈ ပါဝငျ ကစား ခှငျ့ ရရှိ ထားခဲ့ ပါတယျ ။
အထူးသဖွငျ့ ဒီနှေ အပွောငျး အရှေ့ မှာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး မှ တိုကျစဈ ကစားသမား တှေ ဖွဈကွ တဲ့ အလကျဆဈ ဆနျးခကျြ နဲ့ ရိုမီလူ လူကာကူ တို့ အငျတာ မီလနျ အသငျး ဆီ ပွောငျးရှေ့ သှားခဲ့ ကွတဲ့ အတှကျ ဂရငျးဝုဒျ ဟာ ယူနိုကျတကျ မှာ ပှဲထှကျ ကစား ခှငျ့တှေ ပိုမို ရရှိ လာနိုငျ ခွေ မြားပွား နခေဲ့ ပါတယျ ။
အခုတော့ ဖာဒီနနျ က သူဟာ ဂရငျးဝုဒျ ကို အားပေး တဲ့ ပရိသတျ တဈဦး ဖွဈကွောငျး ၊ အကယျဒမီ ထှကျ ကစားသမား လေးဟာ အနာဂတျ မှာ ထှနျးပေါကျ နိုငျ လိမျ့မယျ လို့ ယုံကွညျ ကွောငျး မြှျောလငျ့ ခကျြတှေ ထားရှိ နေ ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ အိုလီ ကလညျး ဂရငျးဝုဒျ ဟာ စီနီယာ အသငျး အတှကျ အဆငျသငျ့ ဖွဈနေ ပွီ ဆိုတာ သိရှိ နပွေီ လို့ ထငျကွောငျး ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
” အိုလီ က ဂရငျးဝုဒျ ဟာ အသငျး အတှကျ အဆငျသငျ့ ဖွဈနေ ပွီလို့ တှေးတော နလေောကျ ပါပွီ ။ ဒါဟာ မာဆှနျ အတှကျ တဈကယျ့ ကို အရေးကွီး လှတဲ့ အခိုကျ အတနျ့ တှေ ပါပဲ ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုနျးက ကြှနျတျော လူငယျ အသငျး တှေ ကစား ကွတဲ့ ပှဲ အခြို့ ကွညျ့ဖွဈ ပါ သေးတယျ ။ ကြှနျတျော TV ဖှငျ့လိုကျ တဲ့ ပှဲတိုငျး သူဟာ ဂိုးတှေ သှငျးယူ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ”
” ဒီ ကောငျလေး က ပါရမီ ကောငျးတှေ ပိုငျဆိုငျ ထားတယျ ဆိုတာ နဲ့ ပတျသကျ လို့ သံသယ ဝငျစရာ မလို ပါဘူး ။ အခုတော့ သူ့ အနေ နဲ့ စီနီယာ အသငျး အတှကျ ပါဝငျ ကစား ပေးနိုငျ ဖို့နဲ့ အကြိုး သကျရောကျ မှုတှေ လုပျပွ သှားနိုငျ ဖို့ပဲ လိုအပျ နပေါ တော့တယျ ”
” အဲ့တာ နဲ့ ပတျသကျ လို့ ကြှနျတျော နှဈသကျ မိတဲ့ အရာ တဈခု က အိုလီ က သူ့ရဲ့ ပွောစကား တှကေို တညျတာ ပါပဲ ။ သူဟာ အခု လူငယျ ကစားသမား လေးတှေ ကို နရော ပေးနေ ပါတယျ ။ ဒါဟာ အခွား အကယျဒမီ ကစားသမား လေးတှေ အတှကျ ‘ ငါတို့ လုံလောကျစှာ ကောငျးမှနျ ကွမယျ ဆိုရငျ စီနီယာ အသငျး မှာ နရော ရနိုငျ လိမျ့မယျ ‘ ဆိုပွီး ကွိုးစား လိုစိတျ တှေ ဖွဈပျေါ စနေိုငျ ပါ လိမျ့မယျ ”
” ဒါဟာ နောငျ လာမယျ့ လူငယျ မြိုးဆကျ သဈ ကစားသမား လေးတှေ အတှကျ လညျး တဈကယျ့ ကို ကောငျးမှနျ လှတဲ့ အရာ တဈခု ဖွဈလာ စနေိုငျ ပါ လိမျ့မယျ ။ အခုတော့ မာဆှနျ ဟာ အသငျး ကွီးဆီ ရောကျရှိ လာပွီး ကောငျးမှနျစှာ ကစားပွ နတေဲ့ အတှကျ ကြှနျတျော ကနြေပျ ပြျောရှငျ မိ ပါတယျ ”
” လူကာကူ နဲ့ ဆနျးခကျြ တို့ ထှကျခှာ သှားခွငျး က ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈ ကို ပေါ့သှား စပေါ လိမျ့မယျ ။ အခုတော့ အသငျး မှာ ကနျြရှိ နတေဲ့ ကစားသမား တှေ အပျေါ ဖိအား တှေ ပိုမို သကျရောကျ လာပါ လိမျ့မယျ ”
” ဒီ အတှကျ အိုလီ က ” နားထောငျ ၊ မငျ ဒီ ဖိအား ဒဏျတှေ ကို ခံစား နိုငျ မလား ? ဒါတှေ ကို ကိုငျတှယျ ဖွရှေငျး နိုငျပါ့ မလား ? ဒီ အတှကျ ခံနိုငျရညျ တှေ အပွညျ့ ရှိ နပွေီ လား ? ” ဆိုပွီး ပွောသှား မှာ အသအေခြာ ပါပဲ ။ ဒီ အတှကျ ကြှနျတျော တို့ အဖွေ တှကေို မွငျတှေ့ ကွရ ပါ တော့မယျ ” လို့ ဖာဒီနနျ က အဆုံးသတျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။